DHEGEYSO: ”Soomaalida waa lagu kari la’yahay inay dhegeystaan talooyinka Covid-19” – Cibaado | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: ”Soomaalida waa lagu kari la’yahay inay dhegeystaan talooyinka Covid-19” – Cibaado
(Malmö) 23 Okt 2020 – Waxaa haatan soo laba kaclaysay moowjad 2-aad oo ah durayga dilaaga ah ee Covid-19, taasoo waafaqaysa saadaal horay loosii bixinayey oo sheegaysey inuu cudurku uu soo laba kaclayn karo marka uu qaboobo heerkulka Yurub ee uu jiilaalku bilowdo. Waxaana meelaha haatan ugu daran ka mid ah Gobolka Skåne ee KG Sweden.
Cibaado Cilmi oo la shaqaysa Maamulka Gobolka Skåne gaar ahaanna ka howlgasha dhanka wargelinta iyo baraarujinta bulshada ayaannu haddaba waxa ka waydiinney inay xog naga siiso isbedelladii ugu dambeeyey iyadoo ku sugan magaalada Malmö.
Previous article”Madaxa ayaa looga jiraa!” – MW Turkiga oo madfac la helay Macron & Faransiiska oo u yeertey Danjirhiisa Ankara
Next articleTOOS u daawo: Liverpool vs Shiffield United, PSG vs Dijon, SS Lazio vs Bologna – LIVE (Shaxda Sugan)